Ọnụ ụzọ, Glass Door Handle, Interior Door Handle - YALIS
Onye bu YALIS Design
YALIS Design na-eduga emeputa pụrụ iche na ụzọ ngwaike maka ibo ụzọ. YALIS Design, bụ ika ọkachasị maka zinc alloy lever ụzọ ejiri yana ọkachamara ụzọ ngwaike ngwaike nwere ihe karịrị afọ 10.
Gịnị Bụ Anyị Main Ngwaahịa
YALIS Design isi ngwaahịa ụzọ ụzọ dị na etiti na njedebe dị elu n'ahịa nwere njiri mara iche na njiri mara mma, yana ọ na-enyekwa ndị ahịa ngwaike ngwaike ngwaike.
YALIS ọgụgụ n'ichepụta ihe
YALIS Design nwere ụlọ ọrụ ya. Iji meziwanye nrụpụta nke ọma, YALIS webatara ngwa nrụpụta akpaka yana sistemụ njikwa ISO na 2020.
Ngwọta Ngwa Ngwaahịa
Ebughibu Glass Glass Door Hardware Solution
Site na ewu ewu nke ụdị ejiji pere mpe, ọnụ ụzọ enyo ebughibe jiri nwayọ jiri bụrụ ndị ahịa. Agbanyeghị, ọtụtụ mkpọchi ụzọ iko dị na ahịa anaghị adabara maka ọnụ ụzọ enyo ụzọ. Iji dozie nsogbu a, YALIS kwalitere ebughibu iko ụzọ ụzọ mkpọchi na ebughibu etiti iko ụzọ ngwaike ngwọta.
Dị ka onye na-eweta ngwaike ngwangwa ngwangwa dị elu, YALIS ewepụtala mkpọchi ụzọ ụzọ dị ntakịrị maka ọnụ ụzọ pere mpe (ọnụ ụzọ anaghị ahụ anya na ọnụ ụzọ dị elu elu) Site na mkpọchi ụzọ ụzọ dị ntakịrị dị ka isi, YALIS na-ejikọ ngwanrọ ngwanrọ ụzọ ụzọ.
Ime Osisi Door Hardware Solution
YALIS emepewo mkpọchi ọnụ ụzọ nke oge a na ọnụ ụzọ ọnụ ala dị ọnụ ala dịka ịmara nke ndị na-eto eto na mkpa nke ndị na-emepụta ọnụ ụzọ, na-enye ụzọ dị iche iche dị n'ime ime ụlọ ụzọ maka ndị ahịa.
Ecological Door Ngwọta Ngwọta
Doorslọ nke ebe obibi, makwaara dịka ọnụ ụzọ osisi aluminom, n'ozuzu ha nwere ịdị elu n'etiti 2.1m na 2.4m, na ihu ụzọ ha nwere ike jikọtara ọnụ ma gbanwee ya na ọnụ ụzọ. YALIS ewepụtala ihe ngwaike ngwanrọ nke ụlọ obibi nke dabere na njirimara ndị a.
Ngwọta Ihe Ngwọta Dozọ Childlọ Childmụaka
YALIS lebara anya na nchekwa nke ụmụaka n'ime ụlọ ahụ, dịka ịkpọchi na mberede, ịda n'ime ụlọ, ihe mberede na ihe ndị ọzọ. Ya mere, YALIS mepụtara mkpọchi ọnụ ụzọ na-egbochi ụmụaka maka ọnụ ụzọ ime ụlọ, nke nwere ike inye ndị nne na nna ohere imepe ụzọ ahụ ngwa ngwa mgbe nwatakịrị nọ n'ihe ize ndụ.
Ejirila ya n'ime ụlọ ọrụ ngwaike ọnụ ụzọ maka ihe karịrị afọ 20 ma nwee nkà n'ọtụtụ akụkụ akụrụngwa ụzọ. Ruo ihe karịrị afọ 20, ọ chịkọtara ahụmahụ bara ụba na nhazi usoro na ihe ọmụma miri emi nke ngwaike ọnụ ụzọ, ma mepụta ngwaahịa dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Dị ka injinia usoro nke YALIS, ọ na-achịkwa usoro ọ bụla na ọrụ ya kwa ụbọchị iji hụ na ọkwa ngwaahịa na ogo ngwaahịa. Na mgbakwunye na ịhụ na ọkwa nka na ogo ngwaahịa, ọ na-amalitekwa ọrụ ọhụụ ọhụụ dị ka mkpa ahịa na ndị ahịa si dị.
Dragọn ahụ · L
Ọdịdị Onye Ọdịdị
Ọ na-enweta mmụọ nsọ site na ndụ kwa ụbọchị, na-agwakọta ụdị ejiji oge a, ma na-eji ọdịiche nke ihe na ihu elu eme ka ngwaahịa ahụ sie ike kamakwa ọ mara mma karị, ma nwekwaa ike ijide obere.
Ọ na-etinye ịnụ ọkụ n'obi ya n'ime ụdị ngwaahịa ọ bụla, na-agbaso nka ebighi ebi na nke pere mpe, ma na-akwado ibi ndụ okike na ịdị mfe. Echiche pụrụ iche nke akara bụ akara ngosi ya, ọ na-achọsi ike ịgbanwe echiche mbido mbụ n'ime ngwaahịa ngwaike pụrụ iche.
Na-atụ Anya Ọdịnihu, YALIS Ga ...
Okwu mmalite: Ọgba aghara nke COVID-19 kpatara emeela ka ụlọ ọrụ ghara ịkwaga na ọkụ na njedebe nke ọwara ahụ, mana na-agbagharị na igwe ojii iji chọta ụzọ. —— Nke European Union Chamber of Commerce na China Na mbido afọ 2020, COVID-19 dara. Ka ọ dị ugbu a, akwụkwọ ụwa ...
CIDE 2021 Bụ Ebe E Si Hazie, YALIS Wa ...
The Ara Of Whole House Customization Is Com with the entire mma of oriri levels and the n'ihu upgrading nke oriri echiche, whole-house customization has been an irreversible eziokwu nke ezinụlọ oriri. China bụ mba nwere oke ego nke ne ...
Ọmụmụ nke Dozọ Ọnụ Handzọ
Oge ọ bụla ị pịa aka n'ọnụ ụzọ iji mepee ọnụ ụzọ ahụ, ọ dịtụla mgbe ị chere banyere ọkwa ndị a ga-agabiga site na ncha tupu ọ pụta n'ihu gị? N'azụ ụzọ nkịtị bụ mbọ siri ike nke ndị na-emepụta ya na nka a ...